I-china BONOVO Medium Digger xcavator Umatshini ohambisa umhlaba wokumba umzi mveliso kunye nabathengisi | Bonovo
IBHAKITIKI YOKUBANZI NGOKUBANZI
I-BONOVO Medium Digger xcavator Umatshini ohambisa umhlaba wokumba
IBonovo ibonelela ngeendlela ezahlukahlukeneyo zokumba ngobukhulu obuphakathi ukusuka kwiitoni ezingama-20 ukuya kwiitoni ezingama-34. Le excavator yeetoni zingama-20 isuka eBonovo yenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zentengiso yemisebenzi ephakathi. Isiphelo soqwalaselo oluphezulu, ukusebenza kwe-injini ene-pump eneempawu zempompo enamandla, ukusetyenziswa okuphantsi kwepetroli kunye nokuziqhelanisa namandla kwepetroli. Ukujongwa ngesikwere kwelinye lamacandelo okhuphiswano kwimarike yesave, iBonovo's WE220H crawler excavator liqabane elifanelekileyo kuluhlu olubanzi lwezicelo zomsebenzi ophakathi.
Ngesanti kubunzulu baphantsi Valve
Max Ukumba ukuphakama
Ubunzima bokumba iRadiyo
Impompo ngesanti kubunzulu baphantsi
Uqobo lweDOSAN Brand
Uhlobo loqobo lweShantui
Amandla okumba ibhakethi
Izinto eziluncedo zobugcisa
Ukusebenza ngokukukoUlondolozo lwaMandla • IPro-Environment
Injini ye-QSB7, iTshayina Stage III kunye ne-Euro III yokuKhutshwa okuThotyelwayo Okunamandla ngakumbi, okuhlala ixesha elide, Ukusetyenziswa kwe-Fuel esezantsi, ukuthembeka okuphezulu kunye nokuSebenza.
Ukufuduswa okukhulu kunye neNkqubo yokuSebenza ngokuQinisekayo yeHydraulic
Ukufuduswa okukhulu kunye nempompo ephezulu yokusebenza kakuhle, ukuvuselelwa kokuhamba kwakhona kwe-boom / stick, isithuthi esihamba ngokukhawuleza, ngempompo elungiselelwe kunye nokuthelekisa injini, max. Ukusetyenziswa kwamandla enjini ukuphucula kakhulu ukusebenza komsebenzi.
Ungayikhusela njani i-excavator yakho kumonakalo ongafanelekanga?
Excavator yakho enkulu mali. Khusela njengoko injalo. Qinisekisa ukuba i-excavator yakho inendlela ethile yokulwa ubusela okanye itekhnoloji. Into yokugqibela oyifunayo kukuba ngesiquphe ungabinaso isiqwenga sezixhobo oxhomekeke kuzo rhoqo. Nazi ezinye iingcebiso malunga nendlela yokuthintela umonakalo.
Ukuvelisa, iinkqubo zokuvavanya kunye nokusetyenziswa
Izahlulo kunye nokuNamathiselwa ukuFumaneka
Ngamanye amaxesha kubunini bakho, unokufuna ukuthenga ezinye izinto ezinokutshintsha. Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba unofikelelo olulula kumacandelo enza umatshini wakho.
Emva kokuba ukhethe i-excavator oyithandayo, jonga ngeenxa zonke ukuze ubone ukuba izinto ezinokutshintsha zinokuthengwa kwindawo yakho. Ngelixa kunganyanzelekanga ukuba zifumaneke ekuhlaleni, ukuba nazo kufutshane kuya kukunceda ukusombulula iingxaki ngokukhawuleza. Ngaphandle koko, kuya kufuneka ulinde iinxalenye eziza kuthumela kuwe.
Qinisekisa ukuba izinamathiselo ziyafumaneka kufutshane nazo. Ngale ndlela, xa uzifuna, ziya kufikeleleka ngokulula. Jonga ukujonga ukuba ngaba kukho iindlela zokurenta, kananjalo, ukuba uya kusebenzisa iziqhoboshelo ezithile ngamanye amaxesha.
Umzi mveliso weBONOVO ingakunika iintlobo ezahlukeneyo zokuncamathisela kwi-excavator yakho, kufuneka ukhankanye zonke iintlobo zeemeko zokusebenza onokujamelana nazo, ukuthengisa kwethu kuya kukunika isisombululo sokuthenga kwangoko kwangoko.
Umzi mveliso weBONOVO Undercarriage uhlala ulindile ukubonelela ngamalungu afanelekileyo okuhamba ngesithuthi kubo bonke oomatshini bakho kubandakanya abembi, oogandaganda, abembi bemizuzu, ii-skid steer layers njl.
Egqithileyo Amphibious Excavator
Okulandelayo: Mini Excavator 1 Ton - ME10
I-excavator yeetoni eziyi-0.8
Isicoci seeToni ezili-11
20 excavator excavator yeetoni ezingama-20
Isicoci seetoni ezingama-20
Iitoni ezingama-20 zokumba
Iitoni ezingama-21 zokumba
Isicoci seetoni ezingama-25
I-excavator yeetoni ezingama-33
6 Excavator Ton
ikharityhulam yekati ephakathi
I-escavatore scavator e
excavator 2 iitoni
excavator 3 ingongoma
excavator e usa
umembi onamandla 1:14
umenzi we-fabrica escavadeira nova iitoni ezingama-20
hitachi yesikhululo seetoni ezingama-20
ukumbiwa kwe-hunia 1593
umkhupheli we-kubota kx 61
umkhupheli we-kubota kx 61-2x
oomatshini abakhasi ukumbamba ama-390 umbungu
excavator eliphakathi ukuthengiswa
ubukhulu excavator medium
excavator encinci rippai 6t
Amavili excavator 16 / 70-24 huachi
Itayara excavator 16 / 70-24 huachi gost 24779-81
I-BONOVO DIGDOG DG18 1.8 iton excavator mini digge ...